सगरमाथा चढ्दै नायिका दीया पुन | We Nepali
नेपालको समय: ०२:२४ | UK Time: 20:39
२०७८ पुष २६ गते १४:१२
लण्डन । नायिका दीया पुनले अप्रिल महिनामा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने भएकी छिन् ।
यसअघि ८ हजार १६३ मिटर अग्लो मनासलु हिमाल चढिसकेकी उनले निजी खर्चमा सगरमाथा आरोहण गर्न जान लागेको बताइन् ।
हङकङमा जन्मेर गोरखा सैनिक पिताको जागिरसँगै कहिले नेपाल, कहिले ब्रुनाइ हुँदै सन् २००० देखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी पुनको हिमाल चढ्ने रहर भने सन् २०१८ बाट शुरु भएको हो । त्यो वर्ष उनले अर्जेण्टिनाको ६ हजार ९६१ मिटर अग्लो माउण्ट अकोनकागुवा चढिन्। त्यसयता हरेक वर्ष एउटा हिमाल चढ्ने उनको योजना थियो तर कोभिड महामारीका कारण रसियाको सबैभन्दा अग्लो हिमाल इल्ब्रस र अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो माउण्ट किलिमञ्जारो चढ्ने योजना भने अधूरै रह्यो ।
उनले सगरमाथा आरोहणमार्फत तीनवटा च्यारिटीका लागि सहयोग संकलन गर्ने भएकी छिन् । जसमा बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) च्यारिटी टुगेदर, उनी कार्यरत कोलचेष्टर अस्पताल च्यारिटी र नेपालमा रहेको चिल्ड्रेन एण्ड युथ फर्स्ट रहेका छन् । ती संस्थाहरुलाई सहयोग संकलन लागि उनले गोफण्डमीमा अलग-अलग पेज पनि बनाइसकेकी छिन् ।
“कोभिडका बेलामा धेरै नर्सहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्यो । कतिले अर्कै पेशा रोजेको पनि देखेँ । त्यसैले सगरमाथा चढ्दा आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा मात्र पूरा नगरेर सहकर्मीहरुका लागि केही सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्य राखेको हुँ” उनले भनिन् ।
सगरमाथा आरोहणको लागि नेपालमा रहेको इलाइट एक्सपीडिसन्सले आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गरिसकेको उनले बताइन् । यो कीर्तिमानी आरोही निर्मल पुर्जाको कम्पनी हो ।
आफ्नो आरोहणमा लाग्ने सबै खर्च आफैँले ब्यहोर्ने उनले बताइन् । “अहिलेसम्म मेरो आरोहणमा कुनै प्रायोजक छैन । म आफैँले सबै खर्च तिर्ने योजना बनाएको छु तर यसबीचमा कोही प्रायोजक आउनुहुन्छ भने पनि स्वागत छ”, उनले भनिन् ।
हिमाल चढ्ने रहर सस्तो कहाँ छ र ? रोयल्टीमात्र हजारौँ डलर पर्छ । त्यस्तै आवश्यक उपकरण र लगाउने लुगा, जुत्ता आदिको खर्च बेग्लै । गाइड र सहयोगीलाई अलग्गै खर्च । यतिधेरै खर्च उनले कसरी जुटाइन् त ? उनलाई सोधियो । “कोरोना शुरु भएदेखि दुईवर्ष म कतै गएको छुइनँ । त्यसैले मैले कमाएको पैसा वचत भएको छ । म त्यही वचत खर्च गर्नेछु”, उनले भनिन् ।
नेपाल जाँदा बाबासित बज्यै भेट्न म्याग्दी शिख गइरहने दीयालाई गाउँघर प्यारो लाग्थ्यो । बेलायतजस्तो विकसित मुलुकमा आइपुग्दा पनि उनलाई शहरको कोलाहल होइन गाउँको शान्त जीवन नै आफ्नो लाग्छ । शायद त्यही स्वभावले होला उनलाई प्रकृति र पर्वतले तानेको । “मलाई कलेज पढ्दा ट्राभल गर्ने रहर जागेको थियो तर पढाइ र करियरलाई प्राथमिकतामा राख्दा त्यो रहर पूरा गर्न पाइनँ” उनले भनिन् ।
पढाइ सकेपछि काम शुरु भयो । घरदेखि काम, कामदेखि घरको दैनिकीले फेरि दिक्दार लाग्न पनि शुरु भयो । त्यो दिक्दारीलाई हटाउन उनी अन्नपूर्ण वेस क्याम्पको यात्रामा गइन् । त्यो यात्राले उनलाई पुनर्ताजगी मात्र दिएन अनौठो किसिमको आनन्द पनि दियो ।
यसरी आनन्दको खोजीमा उनले अर्जेण्टिनाको हिमाल र नेपालकै मनासलुकाे चुचुरो समेत टेक्न पुगिन् । हिमाल चढेपछिको आनन्दका बारेमा उनी भन्छिन्, “शुरुमा सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ तर शिखरमा पुगेपछि प्राप्त हुने सुख वर्णन गर्न सकिँदैन ।”
मनासलु हिमाल आरोहणका बारेमा पनि अर्कै कथा छ । सन् २०१६ मा ‘मन्त्र’ चलचित्रको छायाँकनका लागि उनी गोरखाको सामागाउँ पुगेकी थिइन् । मनासलुको काखमा रहेको त्यो गाउँ पुग्दा उनले कहिल्यै त्यो हिमाल चढिएला भनेर सोचेकी पनि थिइनन् । सुटिङ हुँदै गर्दा ‘मनासलु हिमाल चढ्न जापानी टोली आएको छ रे’ भन्ने हल्ला सुन्दा पनि उनलाई कुनै वास्ता थिएन । तर सन् २०१९ मा उनी कीर्तिमानी आरोही निर्मल पुर्जा (निम्सदाइ) को टोलीमा सामेल भएर मनासलु चढेर आइन् ।
वीरविक्रम, मिस्टर झोले, ह्याप्पी डेज, दयारानी, मन्त्र लगायतका फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी उनलाई सोधियो, “भविष्यमा पर्वतारोहणलाई पेशा बनाउने सोच पो छ कि ?” जवाफमा उनले भनिन्, “पर्वतारोहण मेरो सौख मात्र हो ।”
विश्वकै सर्वोच्च शिखर चढिसकेपछि चढ्न बाँकी के रह्यो र ? के त्यसपछि उनको पर्वतारोहणको यात्रा रोकिन्छ त ? “रोकिँदैन । सातवटै महादेशका हिमाल चढ्ने मेरो इच्छा छ। वर्षको एउटा हिमाल चढिरहन्छु”, उनले भनिन् ।
नर्सको पेशा, अभिनय र पर्वतारोहणको सौख । हालसम्म तीनवटै कुरा सन्तुलनमा चलिरहेको र तीन वटै विधालाई एकसाथ बढाउने उनको योजना छ ।
विश्वमा सबैभन्दा कोभिडग्रस्त मुलुकमध्ये एक बेलायतमा महामारीको समयमा नर्सको रुपमा सेवा गरेकी दीयालाई सोधियो, कोभिडको अनुभव कस्तो रह्यो ? उनको जवाफ थियो, “त्यतिबेला केही सूचना नै थिएन । बिरामीलाई स्याहार गर्ने नर्सहरु नै शारीरिक र मानसिक रुपमा तनावग्रस्त र थकित थिए । यस्तो त अब कहिल्यै नहोस् ।”